A Mother’s Love မိခင်မေတ္တာ – အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ
A Mother’s Love မိခင်မေတ္တာ
10May 2013 14 Aug 2018
မိခင် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာရေးဆရာ တစ်ဦးက သည်လို ရေးသားခဲ့ဘူးသည်။ “မိခင်များဟာ ဘဝရဲ့ ဆရာသမား၊ စည်းကမ်း ထိန်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သား၊ ခြံလုပ်သား၊ များဖြစ်တယ်။ မိခင် အားလုံး နီးပါးက ချက်ပြုတ် ခြင်းဟာ အိမ် ပြူတင်းပေါက် များကို ဆေးကြော သန့်စင် ခြင်း အလုပ်ထက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်တယ်”။ ဟုတ်ပါတယ်. . . မိခင်များဟာ သူနာပြုဆရာမ၊ ဒေါက်တာ၊ နည်းပြဆရာ၊ ဘဝများကို ပုံသွင်း ထုလုပ်သူ များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မိခင်များဟာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ ဘဝမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အကြောင်း ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက် ပေးသူ၊ သင်ကြားပေးသူများ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ အားလုံး ဘုရားကို ချစ်ခြင်း၊ ရိုသေခြင်း၊ လေးစားခြင်း၊ ဘုရားအတွက် သက်သေခံခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းတက်ခြင်း ဘုရားသခင် ကြိုက်သော ပုံစံ အတိုင်း ကြိုးစားသွားလာ နေထိုင်လိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စတဲ့ အရာတွေဟာ မိခင်ကြီးများ ချပြသင်ပေးခဲ့သော အရာများ၏ ရလဒ်များဖြစ်သည်။
ပုံပြင်ကလေးတစ်ခုတွင် ဘုရားသခင်သည် လူမိခင် တစ်ယောက်ကို ဖန်တီး နေသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို မိခင်ကို ပြုလုပ် ပုံသွင်း ရန်အတွက် အချိန်မြောက်များစွာ ကုန်လွန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း စိတ်တိုင်း မကျနိုင်သေးသဖြင့် ဇွဲနဘဲ ကြီးမားစွာဖြင့် ဆက်လက်ပြုလုပ် နေသည် ကို တွေ့မြင်သော ကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးက –
“ကိုယ်တော်… အခုလုပ်တဲ့ လူသား မိခင် အတွက် အချိန် အများကြီး ကုန်ခဲ့ပြီနော်… ”
လို့ သတိပေး သည့် အနေနှင့် ပြောလိုက်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန် ဖက်သို့ ညင်သာစွာ ခေါင်းလှည့်ပြီး ပြန်ဖြေသည်။
“ဒီ . . လူသားမိခင် ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ပုံ ကို အသေအချာ ကြည့်ပြီးပြီလား… သူဟာ ရေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ဆေးဆေး ခံနိုင်ရည်ရှိသူ ဖြစ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့် ပလတ်စတစ် နဲ့တည်ဆောက်ထားတာ မဖြစ်ရဘူး၊ သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမြန်အဆန်နဲ့ အလွယ်တကူ လှုပ်ရှားလို့ ရတဲ့ အစိတ် အပိုင်းပေါင်း ၁၈၀ လောက်ရှိပြီး ပျက်စီးသွားရင်လည်း အစိတ်အပိုင်းသစ် နဲ့အလွယ်တကူလဲလှယ်လို့ ရ ရမယ်၊ သူ့ရဲ့ အနမ်းဟာ ကျိုးပဲ့ နေတဲ့ ခြေ၊ လက်တွေ ကအစ ကြေမွနေတဲ့ နှလုံးသားတွေကို အကောင်း ပကတိ အတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေနိုင် စွမ်း ရှိရမယ်၊ ဘလက်ကော်ဖီ နဲ့ စားကြွင်းစားကျန် တွေနဲ့ လည်း အသက်ရှင်၊ လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်၊ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ လက် ခြောက်စုံ ရှိရမယ်”။
ကောင်းကင် တမန် က
“လက်ခြောက်စုံ . . . ဟုတ်လား? မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်”
“လက်ခြောက်စုံတပ်ဆင်ရမှာ ငါ့အတွက် ပြဿနာမဟုတ်ဘူး. . .သူ့မှာ မျက်စိ သုံးစုံ ရှိမှ ဖြစ်မယ်. . . အိပ်ခန်းတံခါး ပိတ်ပြီးနေတဲ့ အထဲက သား၊ သမီးတွေကို ဘာလုပ်နေကြတာလဲ လို့ မေးနေတဲ့ တချိန်ထဲမှာဘဲ မျက်စိ တစ်စုံ က သူ့ သားသမီးတွေ ဘာလုပ်နေသလဲ ဆိုတာ မြင်နေပြီး ဖြစ်နေရမယ်၊ နောက်စေ့ ဖက်မှာ လည်း မျက်စိ တစ်စုံ ရှိမှဖြစ်မယ်. . သူ . . တွေ့မြင်ဖို့ အတွက် မသင့်တော် ပေမယ့် မြင်ကို မြင်ရမှ ဖြစ်မယ့် အရာတွေကို ကြည့်ဖို့ အတွက်ပေါ့. . . နောက်တစ်စုံ ကတော့ မျက်နာမှာ ရှိပြီး၊ သူ့ သားသမီးတွေကို စကား တစ်ခွန်း မှ မပြောရင်တောင်မှ communicate လုပ် နိုင်စွမ်းရှိ တဲ့ မျက်လုံးတွေဖြစ် ရမယ်လေ”
ကောင်းကင်တမန်သည် စိတ်ရှုပ်ထွေး သွားပြီး နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် . . .
“အဲဒါတော့ နဲနဲ လွန်နေပြီ ထင်တယ်… ကိုယ်တော်၊ အနားလေး ဘာလေး ယူပြီး နောက်နေ့ကျမှ ဒီ မော်ဒယ်လ် ကို ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလား”. . .
“မဖြစ်ဘူး. . . ငါနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး၊ အတူဆုံး လူသား မော်ဒယ်လ် တစ်ခု ကို လုပ်နေဒါ ပြီးခါနီး နေပြီ . . . သည် မိခင်ကြီး လို့ခေါ်တဲ့ လူသား မော်ဒယ်လ် ပြီးရင်… နေမကောင်းတဲ့ အခါ သူ့ကိုယ်သူ ဆေးကုနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်. . . မိသားစု အားလုံး စားဖို့ သောက်ဖို့ စီစဉ် ချက်ပြုတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်. . . အသက် (၉) နှစ်အရွယ် သားငယ် ကလေး၊ ရေမချိုးချင် ဘဲ ငြင်းဆန် နေရင်လဲ ရေချိုးချင်အောင် ချော့မော့ ဖြောင်းဖျနိုင်စွမ်း ရှိရမယ် ”
ကောင်းကင်တမန် က ပြီးခါနီး မိခင်ကြီး ကို အနီးကပ် ကြည့်ရင်း. . .
“ဟင်း. . . သူ့ အသားရေတွေက ပျော့ပျော့လေး”
ဟု ဆောဒကတက်သည်။ ဘုရားသခင်က. .
“ဟုတ်တယ်. . . ဒါပေမယ့် အရမ်း အကြမ်းခံအောင် လုပ်ထားတယ်. . .ဒီ . . မိခင် လူသားမော်ဒယ်လ် ရဲ့ စွမ်းဆောင် နိုင်စွမ်း တွေကို မြင်ရင် နင်.. ယုံတောင် ယုံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး”
ဟု ပြန်ဖြေသည်။ ကောင်းကင်တမန်က
“စဉ်းစားတတ် တဲ့ အရည်အချင်းကော ရှိမလား?”
ဟု မေးလိုက်သည်၊ ဘုရားသခင်က ပြန်ဖြေသည်။
“စဉ်းစားတတ်ရုံ မက . . . ချင့်ချိန် တတ်မယ်. . အပေးအယူ လုပ်တတ်တယ်. . ဖျောင်းဖျ တတ်တယ်” ။
ကောင်းကင်တမန်က အလွန် စိတ်ဝင်စားသွားပြီး ပြီးခါနီး မိခင်ကြီး၏ ပါးပြင်ကို တို့သည်. . .
“ဟင်. . . ဒီနေရာ မလုံဘူး. . အထဲက ရေတွေ စိမ့်ထွက်နေတယ်”
ဟု ပြောရာ ကိုယ်တော်က . . .
“အဲဒါ မလုံလို့ စိမ့် ထွက်နေဒါမဟုတ်ဘူး. . . မျက်ရည်လို့ခေါ်တယ်”
“မျက်ရည်. . . ဟုတ်လား ဘာလုပ်ဖို့လည်း?”
“ပျော်ရွှင်ချိန်၊ ဝမ်းနည်းချိန်၊ စိတ်ပျက်အားလျော့ချိန် နဲ့ ဂုဏ်ယူဝန့်ကြွား ချိန်တွေမှာ သုံးဖို့ပေါ့”
“တတ်လဲ တတ်နိုင်ပါပေတယ်. . . ကိုယ်တော်ရယ်”
အထက်က ပုံပြင်ကို စိတ်နှလုံးထဲ၌ စွဲမှတ်လျက် ရှင်မသဲ ၂၀း ၂၀-၂၃ ကို လေ့လာကြည့် ကြပါစို့။
“ထိုအခါ ဇေဗေဒဲ၏သားတို့အမိသည် သားတို့နှင့်အတူ အထံတော်သို့ချဉ်း၍ ပြပ်ဝပ်လျက် ဆုကျေးဇူးကို တောင်းပန်လေ၏။ ကိုယ်တော်က သင်သည် အဘယ်ဆုကျေးဇူးကို အလိုရှိသနည်းဟု မေးတော် မူသော်၊ ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတွင် ကျွန်မ၌ ဤသားနှစ်ယောက်တို့သည် လကျ်ာတော်ဘက်၌ တယောက်၊ လက်ဝဲ တော်ဘက်၌ တယောက် ထိုင်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။ ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ တောင်းပန်သည်ကို သင်တို့မသိကြ။ ငါသောက်ရအံ့သော ခွက်ကို သောက်ခြင်းငှာ၎င်း၊ ငါခံသော ဗတ္တိဇံ ကို ခံခြင်းငှာ၎င်း၊ သင်တို့သည် တတ်စွမ်းနိုင်သလောဟု မေးတော်မူလျှင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် တတ်စွမ်းနိုင်ပါ၏ ဟု လျှောက်ကြသော်၊ ငါ၏ခွက်ကို သင်တို့သည် သောက်ရကြလိမ့်မည်။ ငါခံသော ဗတ္တိဇံ ကိုလည်း သင်တို့သည် ခံရကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ငါ၏လက်ျာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာ ထိုင်ရသောအခွင့်ကိုကား အကြင်သူတို့အဘို့ အလိုငှါ ငါ့ခမည်း တော်သည် ပြင်ဆင်၏၊ ထိုသူတို့အားသာ ငါပေးပိုင်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
သားႏွစ္ေယာက္အတြက္ အခြင့္ေတာင္းေသာ မိခင္ႀကီး ေဇေဇဒဲ
ဇေဗဒဲ၏ အမျိုးသမီး၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန် တို့၏ မိခင် သည် သခင်ယေရှု ဟောသော ကောင်းကင် နိုင်ငံတော် အကြောင်းကို စိတ်တွင် စွဲနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ သား နှစ်ယောက်ဖြစ်သော ယာကုပ် နှင့် ယောဟန် တို့ သည်လည်း သခင်ယေရှု နှင့် အဖွဲ့သားများ ဖြစ်ကြသည်ကို သိရှိသူ မိခင်ကြီး လည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တမန်တော် ၁၂ ပါးထဲမှ သူ၏ သား နှစ်ယောက်သည် သခင်ယေရှု နှင့် ပိုမို၍ နီးနီးကပ်ကပ် သွားလာ လှုပ်ရှားသော၊ အတွင်းလူ အနည်းငယ်တွင် အပါအဝင် ဖြစ်သည် ကိုလည်း သူမ နားလည်သည်။ ထိုကြောင့် မိခင်ကြီးသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် တည်သောအခါ သူ၏ သား ၂ ယောက်အတွက် အခွင့် အာဏာ တန်ခိုးကို ကြိုတင် တောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည်မှာ ဤ အဖြစ်အပျက် မတိုင်ခင် ဟောသော သခင်ယေရှု ၏ ဥပမာ ပုံဝတ္ထူ တစ်ခုကြောင့် မိခင်ကြီး သည် သားငယ် နှစ်ယောက် အတွက် ရတက်မအေး ဖြစ်သွားချေရှိသည်။
ထို ပုံ ဥပမာတွင် စပျစ်ဥယျာဉ် ပိုင်ရှင် တစ်ယောက် က နံနက်စောစော အလုပ်စသော အလုပ်သမား၊ နေမွန်းတဲ့ချိန်မှ ဝင်သော အလုပ်သမားများ၊ ၂ချက်တီး ၃ ချက်တီးချိန်မှ အလုပ်စဝင်သော အလုပ်သမားအားလုံး လုပ်အားခအဖြစ် ဒေနာရိ တစ်ပြားစီ အတူတူ ပေးသည် ဟု ဆိုသည်။ ထို ပုံဥပမာ ကို ကြားသော မိခင်ကြီးက သူ၏ သား ၂ ယောက် အစအဦး ပိုင်းတွင် သခင်ယေရှု နှင့် အတူလက်တွဲ လုပ်ကိုင်လာခဲ့သော်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် တွင်နောက်မှ ဝင်လာမည့် ယုံကြည်သူ နောက်လိုက်တပည့် များနှင့် အဆင့်တူ၊ ထူးမခြားနား ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ် ပူပန်သွား ဟန်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခွင့်အခါ ရသည်နှင့် ရသည့် အခွင့် အရေးကို လက်လွတ်မခံဘဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် တွင် သူမ၏ သား နှစ်ယောက်အား လက်ဝဲ၊ လက်ယာ နေရာ၌ ထိုင်ရသော အခွင့်အရေးကို တောင်းလျှောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဤ ကျမ်းပိုဒ် ကို ဖတ်သည့် အခါခါ တိုင်း ဤ မိခင်ကြီးကို မကဲ့ရဲ့ မရှုတ်ချ သည့် တိုင်အောင် စိတ်တွင် အားမလို အားမရ ဖြစ် တတ်လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော်လည်း ယခုလ သည် မိခင်ကြီးများနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဇေဗေဒဲ ၏ အမျိုးသမီး သားနှစ်ယောက် မိခင်ကြီး နှင့်ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင် ရှုထောင့် ဖက်မှ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
၁။ သား နှစ်ယောက် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ရောက်ရန်ဆုတောင်းသည်။
သူမသည် သားနှစ်ယောက် တမလွန် ဘဝ၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ၏ အရေးပါ အရာရောက်သည့် နေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ အသုံးတော်ခံ များဖြစ်စေ လိုသည့် ဆန္ဒနှင့် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သား နှစ်ယောက်ကို ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ရောက်စေချင်သည်။ မိခင်ကောင်း တစ်ယောက် အနေနှင့် အလွန့်အလွန် မွန်မြတ်သော အမျှော်အမြင်ကြီးသော ဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်။ အချို့သော မိခင်များသည် များမြောင် လှသော အိမ်မှု ကိစ္စများ၊ ချက်ရေးပြုတ်ရေး များကြား နှစ်မြှပ်ပြီး၊ သားသမီးများအတွက် ဆုတောင်းရန်ပင် သတိမရဖြစ်တတ်ကြသည်။ မိခင် တစ်ယောက် ၏ တာဝန် သည် များပြားရုံ မက ခက်ခဲလှသည် သို့သော် ဇေဗေဒဲ ၏ အမျိုးသမီးသည် သားနှစ်ယောက် အတွက် တန်ဘိုးရှိသော၊ အမျှော်အမြင်ကြီးသော ဆုတောင်းခြင်း အမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့်သူ ဖြစ်သည်။ သားသမီးများ အတွက် လောက နှင့် သက်ဆိုင်သော ကျန်းမာခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ ပညာရှိခြင်း၊ လိမ္မာရေးခြားရှိခြင်း စသည့် ကောင်းကြီးများ အရေးကြီးသလို နောင်တမလွန်ဘ၀ ထာဝရ လျှောက်လှမ်းရမည့် ခရီးအတွက် သာ၍ အရေးကြီးကြောင်း သတိရစေပါသည်။
၂။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ သစ္စာရှိသော အစေခံများဖြစ်စေကြောင်းသတိရသည်။
ဒုတိယအချက် အနေနှင့် ဤ မိခင်ကြီးသည် သား ၂ ယောက်ကို ကောင်းကင်နိုင်ငံ ဝင်စားရုံမျှသာ မက၊ ဘုရားသခင် ၏ သစ္စာရှိသော အစေခံ၊ ငယ်သားကောင်း များဖြစ်စေကြောင်း ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းသူ ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ယနေ့ အသင်းတော် များတွင် တနင်္ဂနွေနေ့ ဘုရားကျောင်းလာပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိရုံ၊ ကောင်းကြီးလက်ခံရုံ အတွက်သာ စိတ်ကူးရှိသူ၊ ဆန္ဒရှိသည့် ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များ များပြားလာသည်။ ကယ်တင်ခြင်း၊ စိတ်ချမှု ရရုံ နှင့် ကျေနပ်တတ်ကြပြီး ဘာဆို ဘာ တစ်ခုမျှ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်၊ အစေခံရန်၊ ဝေမျှရန်၊ အသုံးတော်ခံရန် ဆန္ဒမရှိတတ်ကြ။ အသင်းတော်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ငန်း များတွင်လည်း တတ်နိုင်သရွေ့ ပါဝင် လုပ်ကိုင်ရန် တွန့်ဆုတ်တတ်ကြသည်။ ဇေဗေဒဲ ၏ အမျိုးသမီးသည် သားနှစ်ယောက် ကောင်းကင် နိုင်ငံတော် ဝင်စားရုံမျှမက ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ သစ္စာရှိသော အစေခံကောင်းများ ဖြစ်စေပါမည့် အကြောင်း ဆုတောင်းသည့်၊ သတိရသည့် မိခင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည် ကို သတိရကြပါစို့။
၃။ သား ၂ယောက်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးသည်။
ဇေဗေဒဲ ၏ အမျိုးသမီး သည် သားနှစ်ယောက် အတွက် ရည်ရွယ်ချက် ကြီးကြီးမားမား ထားသူဖြစ်သည်။ သား ၂ ယောက်ကောင်းကင် နိုင်ငံတော် ဝင်စားလျှင် တော်ပြီ တံခါးစောင့်ဘဲ လုပ်ရလုပ်ရ၊ စားပွဲထိုးဘဲ လုပ်ရလုပ်ရ ဟု အားလျော့သည် ပုံစံ၊ ပျင်းရိသည့် ပုံစံနှင့် ပြီးစလွယ် ဆုတောင်းခြင်း မျိုးမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ သားနှစ်ယောက်အတွက် သူမ တောင်းလျှောက်သည့် နေရာသည် ဘုရားသခင်၊ သခင်ယေရှု ပြီးလျှင် တန်ခိုးအာဏာ အရှိဆုံး နေရာ၊ တနည်းအားဖြင့် လုပ်စရာ ကိုင်စရာ များကို အများဆုံး တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်သော နေရာ၊ ရာထူးဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များ အားလုံးသည်လည်း ဘုရားသခင်အတွက်၊ နိုင်ငံတော် အတွက် မိမိကိုယ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပေးဆပ် သင့်သည်၊ အသုံးတော်ခံသင့်သည်။ ကျွန်တော်ကတော့၊ ကျွန်မကတော့ ဘာမှ တတ်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး၊ ဘုရားကျောင်း ရောက်ရင်တော်ပြီ၊ ပြီးရင် အိမ်ပြန်မယ် ဆိုတဲ့၊ နိမ့်ကျ လွန်းလှတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အစား၊ ဘုရားသခင်အတွက်၊ အသင်းတော် အတွက်၊ အသင်းသူ အသင်းသားများအတွက် မိမိ တတ်နိုင်သမျှ၊ အစွမ်းအစ ရှိသမျှ ပါဝင်မယ်၊ ဆက်ကပ်မယ်၊ အသုံးတော်ခံမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် များထားရှိတတ်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ဤ မိခင်ကြီးက သတိရစေပါသည်။
အထက်က ပုံဥပမာကလေးတွင် ဘုရားသခင်က. . . “ငါနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး၊ အတူဆုံး လူသား မော်ဒယ်လ် တစ်ခု ကို လုပ်နေဒါ ပြီးခါနီး နေပြီ . .” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ မှန်ပါသည်. . . မိခင်ကြီးများသည် ဘုရားသခင် ၏ သဏ္ဍာန်၊ အတွေးအခေါ် နှင့် စိတ်ဓါတ် နှင့် အနီးစပ်ဆုံး တူသည့် လူသားများဖြစ်သည် ဟု မိခင်များကို ဂုဏ်ပြု ချီးကျူးချင်ပါသည်။
နာဇီ စစ္စခန္းတစ္ခုမွ ဂ်ဴးအက်ဥ္းသားမ်ား
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကာလ အတွင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ဖြစ်ဇတ်မှန် ဇတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ် အားဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်လိုပါသည်။ Solomon Rosenberg နှင့် ဇနီး တို့တွင် အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော သား ၂ ယောက်ရှိပြီး နာဇီဂျာမဏီ တို့၏ စစ် စခန်း တစ်ခုတွင် အဖမ်းခံရသော ဂျူးလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ Rosenberg ၏ မိခင် နှင့် ဖခင် ကြီးသည်လည်း မိသားစုနှင့် အတူ စစ်စခန်းတွင် အဖမ်းခံရသည်။ အလုပ်ကြမ်း စစ်ထောင် စခန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂျာမဏီ တို့ ခိုင်းသမျှ လုပ်နိုင်သည့် ခွန်အားရှိနေသေး သမျှ အသက်ရှင်ခွင့် ရှိသေးသည် ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ် ကို လက်ကိုင်ထားသည့် စစ်စခန်းဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်ရန် ခွန်အား မရှိတော့ဘူး ဆိုလျှင် အသတ်ခံရသည်။ Rosenberg သည် ချစ်ခင် လေးစား ရပါသော မိခင် နှင့် ဖခင် နှစ်ဦးစလုံး အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ သဖြင့် အသတ်ခံရန် နာဇီစစ်သားများ ခေါ်ရာနောက် လိုက်သွားခဲ့ရသည်ကို ရင်နင့်စွာ တွေ့မြင် ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ နောက်တကြိမ်ဆိုလျှင် သားငယ် ဒေးဗစ် ကို စစ်သားများ ခေါ်သွားသည်ကို မြင်တွေ့ရလိမ့်မည် ဟုလည်း သိရှိခံစားမိသည်။ သားငယ် ဒေးဗစ် ခမျာ မွေးကတည်းက စပြီး ချူချာခဲ့သူ မဟုတ်လား။ အခုပင်လျှင် ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သည့် ခွန်အားမရှိတော့ပါ။ ညနေခင်းတိုင်း အလုပ် လုပ်ရာမှ စခန်းအတွင်း ပြန်ဝင်သော အခါခါတိုင်း ပထမဦးဆုံး ဇနီးနှင့် သား နှစ်ယောက် ပြန်လာ မလာ အရင် ရှာဖွေသည်။ မိသားစု စုံစုံညီညီ တွေ့ရသော အခါ အချင်းချင်း ပွေ့ဖက်ပြီး တစ်ရက်တာ တွေ့ဆုံခွင့် ပေးနေသေးသော ဘုရားသခင် ကိုကျေးဇူးတင် ကြသည်၊ မိသားစု အတူတူ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းကြသည်။
တစ်ခုသော ညနေခင်း စခန်းကို ပြန်လာသော အခါ မိသားစု အားလုံး တစ်ယောက်မျှ မတွေ့ရ။ ပူပန်သောက စိတ်ဖြင့် မိသားစု များကို စခန်းတစ်ခုလုံး အတွင်း အပြေးအလွား လိုက်ရှာသည်။ နောက်ဆုံး အနည်းငယ် မှောင်နေသော ထောင့် တစ်ခုတွင် ငိုယိုလျက် ဆုတောင်းနေသော သားကြီး Joshua ကို တွေ့လိုက်သည်။ သားကြီးအား
“အဖေ့ကို ပြောပါအုံး. . . မင်း အမေနဲ့ မောင်လေး ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား…”
သူကြားချင်သော အဖြေ Joshua ထံမှ ထွက်မလာပါ။
“ဖြစ်တယ် ဖေဖေ… ညီလေး သည်နေ့ အလုပ် လုပ်ဖို့ ခွန်အားမရှိတော့ဘူး. . ညီလေးကို သူတို့ ခေါ်သွားကြပြီ ”
“ဒါဆိုရင် နင့် အမေကော. . .နင့် အမေဘယ်မှာလဲ?”
Joshua က ပြန်ဖြေသည်. . .
“ညီလေးကို သူတို့ ခေါ်သွားဖို့ လုပ်တော့… သူ အရမ်းကြောက်ပြီး ငိုတယ်.. မလိုက်ချင်ဘူး လို့လဲ အတင်း ငြင်းတယ်… အဲဒါကို တွေ့ရော အမေက…သားရယ်ဘာမှ မကြောက်နဲ့. . . အမေလဲရှိတယ်… အမေလိုက်ပို့ပေးမယ် မပူနဲ့ .. လာ အမေနဲ့ အတူသွားမယ် ဆိုပြီး အမေပါ လိုက်သွားတယ်၊ ပြန်မလာတော့ဘူး. . .”
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ အားလုံးရဲ့ ဘဝမှာ မိခင် ရဲ့ မေတ္တာ နဲ့ ချစ်ခြင်းကို တနည်း မဟုတ် တနည်း ခံစား ခဲ့ကြရဘူးမည်ဟုထင်သည်။ မိခင်များတိုင်းသည် အထက်က နာဇီ စစ် အကျဉ်းစခန်းက မိခင်ကြီး ကဲ့သို့. . . သူချစ်သော သား သမီးများအတွက်ဆိုလျှင် ဘာမဆို ပေးဆပ်ဖို့ သတ္တိရှိကြသည်၊ အချိန်မရွေး အဆင်သင့် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ဘုရားသခင် က သူနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူညီအောင် ဖန်ဆင်းထားသော မိခင် များ၏ အံ့မခန်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ သည်နေ့ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်း တရားတွေကိုကော မိတ်ဆွေ မြည်းစမ်း ကြည့်ပြီးပြီလား? မိတ်ဆွေရဲ့ အပြစ်တွေအားလုံး ဆေးကြောဖို့ အတွက် သခင်ယေရှု ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံခဲ့တယ်။ မိတ်ဆွေကို ဘုရားသခင် ချစ်တယ်။
မိခင်ကြီးများ အားလုံး ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ ဟု ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်း. . .
မိခင်များအားလုံးကို အစဉ်လေးစား ချစ်ခင်လျက်……။
မှတ်ချက်။ ။ Melvin Newland ၏ A Mother’s Love ကို ကိုးကားတင်ပြထားပါသည်။
Tags: မိခင်များနေ့, Mother' day, Thawngno
Previous Sayama Naw Hla Kyi at Women Fellowship
Next Ko Aung Naing at CBC
11 May 2013 at 6:55 am
ႏွလုံးသားကို အလြန္တို႔ထိ ပါသည္၊ အရမ္းေကာင္းတဲ့ မိခင္ေမတၱာကိုေဖာ္က်ဴးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေက်းဇူးတင္တယ္ O Haukhek, ဘုရားရွင္ သာ၍ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ….